DOWNLOAD TWEAKER NZUZO WINDOWS N'EFU NA KỌMPUTA GỊ - MMEMME NYOCHA - 2019
Windows Tweaker nzuzo Windows 2.1
Fod2 (FictionBook) ka edepụtara iji hụ na mgbe ị na-ebudata e-akwụkwọ na ngwaọrụ ọ bụla enwereghị esemokwu site n'ịgụ na ngwanrọ dị iche iche, ya mere, a pụrụ ịkpọ ya ụdị data zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị akwụkwọ DOC ka ị gụkwuo na ngwaọrụ ọ bụla, ọ ka mma ime ya na usoro ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, yana ọrụ pụrụ iche dị n'ịntanetị ga-enye aka ime ya.
DOC tọghata na FB2 na mmemme
Okwu Ntughari na FB2 faịlụ
DOC tọghata na FB2 n'ịntanetị
Enweghị ihe mgbagwoju anya banyere ntụgharịgharị nke faịlụ na ihe ejiri na Intanet. Ihe niile ị ga - eme bụ ibudata ihe ahụ, họrọ usoro achọrọ ma chere maka nhazi ahụ iji mezue. Otú ọ dị, anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ntụziaka zuru ezu maka ịrụ ọrụ na saịtị abụọ dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eche ọrụ yiri nke ahụ maka oge mbụ.
Usoro 1: DocsPal
DocsPal bụ onye na-agbanwe agbanwe nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ọtụtụ ụdị data. Nke a gụnyere akwụkwọ ederede n'ụdị dị iche iche. Ya mere, iji mee nsụgharị nke DOC na FB2, ọ zuru oke. A chọrọ gị naanị ka ị rụọ ọrụ ndị a:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ DocsPal
Mepee isi akwukwo DocsPal wee tinye akwukwo maka ntughari.
Ihe nchọgharị ga-amalite, ebe site na ịpị bọtịnụ aka ekpe ka ịhọrọ faịlụ achọrọ ma pịa "Meghee".
Ịnwere ike ibudata ruo faịlụ ise n'otu usoro nhazi. Maka onye ọ bụla n'ime ha, ị ga-ezipụta nkọwa ikpeazụ.
Gbasaa menu ndọpụta ma chọta akara ahụ. "FB2 - Fiction Book 2.0".
Lelee igbe kwekọrọ ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta njikọ njikọta site na email.
Malite usoro ntughari.
Mgbe a sụgharịrị nsụgharị ahụ, akwụkwọ edinyere ga-adị maka nbudata. Were ya na kọmputa gị, wee jiri ya na ngwaọrụ ịchọrọ ịgụ.
Usoro 2: ZAMZAR
ZAMZAR bụ otu n'ime ndị ntanetị a ma ama n'ịntanetị na ụwa. A na-emegharị ya na Russian, nke ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ ọzọ. Nhazi data ederede ebe a bụ:
Gaa na weebụsaịtị ZAMZAR
Na ngalaba "Nzọụkwụ 1" pịa bọtịnụ "Họrọ faịlụ".
Mgbe ebuchara ihe ndị a, ha ga-egosipụta na listi ntakịrị ala na tab.
Nzọụkwụ nke abụọ bụ ịhọrọ nhazi ikpeazụ a chọrọ. Gbasaa menu ndọpụta ma chọpụta nhọrọ kwesịrị ekwesị.
Chere maka ntughari iji mezue.
Mgbe ahịrị nke bọtịnụ ahụ "Download" nwere ike ịga ibudata.
Gbalịa ịrụ ọrụ site na akwụkwọ edinyere ma ọ bụ mgbanwe ọzọ.
Pịgharịa PDF na FB2 n'ịntanetị
Esi mee ka DJVU ghọọ FB2
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa ná nkwubi okwu ezi uche dị na ya. N'elu, anyị gbalịrị ịkọwa n'ụzọ zuru ezu usoro maka ịnyefe DOC ka FB2 jiri ihe atụ nke ọrụ abụọ n'ịntanetị. Anyị na-atụ anya na ntụziaka anyị nyere aka ma ị nwekwaghị ajụjụ gbasara isiokwu a.